अमेरिकामा ५४ तले बिल्डिङमा हेलिकप्टर खस्यो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
वाशिङटन। अमेरिकाको म्यानहटनमा एक ५४ तले भवनमा हेलिकप्टर खसेको छ । सोमबार साँझ आकस्मिक ल्याण्ड गर्ने प्रयास गरिरहेको विमान बिल्डिङमाथि खसेको हो । दुर्घटनामा पाइलटको मृत्यु भएको छ ।
यूयोर्कका गभर्नर एन्ड्रयू कुओमोका अनुसार अगस्टा ए १०९ इ हेलिकप्टरलाई आपतकालीन स्थितिमा भवनको छतमा ल्याण्ड गराइँदै थियो । यस क्रममा हेलिकप्टरमा आगो लाग्यो । भवनमा रहेका सबैलाई बाहिर निकालियो ।